Cela ukubuyiselwa imali - Iziko Loncedo lakwa-Airbnb
Cela ukubuyiselwa imali – inqaku loncedo
Ukuba ufuna ukucela ukubuyiselwa imali ngaphambi okanye emva kohambo lwakho, izicelo zokubuyiselwa imali nokuba yimalini zinokwenziwa Kwiziko lethu Lezemali.
Sicebisa ukuba uthethe noMbuki Zindwendwe wakho ngokuba yimalini ofuna ukuyibuyiselwa kwimiyalezo oyifumeneyo noyithumeleyo yakwa-Airbnb ngaphambi kokuba ufake isicelo Kwiziko Lezemali. Kodwa ke, ukuba wena noMbuki Zindwendwe wakho anide nifikelele kwisivumelwano kwiiyure eziyi-72, uza kukwazi ukucela uAirbnb ukuba angenelele ekufumaneni indlela yokulungisa ingxaki.
Phawula: Uneentsuku eziyi-60 emva kosuku ophume ngalo zokuba ufake isicelo Kwiziko Lezemali.
Ukuba unengxaki ngoxa usahleli, siza kukunceda ucele Umbuki Zindwendwe wakho ukuba ayilungise, ucele ukubuyiselwa imali okanye ucele ukurhoxisa uze ubuyiselwe yonke imali. Kubalulekile ukufaka isicelo zingekapheli iiyure eziyi-24 emva kokuphawula ingxaki kuhambo. Umbuki Zindwendwe wakho uza kuba neyure eyi-1 yokuphendula. Ukuba akavumi okanye akaphenduli, ungacela uAirbnb ukuba angenelele ukuze akuncede.